अन्तत: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रचण्डकै घरबेटीले पाए ! – सुदूरखबर डटकम
अन्तत: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रचण्डकै घरबेटीले पाए !
बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डेढ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ । विवादास्पद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई आयोजनाको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रको पाइपलाइन विस्तार तथा ओभरहेड ट्याङकी निर्माणको ठेक्का पाएको हो ।
एक अर्ब ४१ करोड ६९ लाख २२ हजार ७६० रुपैयाँमा अनामनगरस्थित आयोजना निर्देशनालय कार्यालयले शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको समाचारमा जनाइएको छ । सबैभन्दा कम रकम कबोलेका कारण शैलुङसँग मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तारको काममा सम्झौता गरिएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मिलनकुमार शाक्यले बताए ।
३० महिनाभित्र काम सक्ने गरी शैलुङसँग चार महिनाअघि निर्देशनालयले सम्झौता गरेको छ। बिना मगर खानेपानी मन्त्री भएकै बखत उनका ससुरा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी ठेकेदार अधिकारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएका हुन् । मन्त्री मगर आफैं पनि अहिले खुमलटारस्थित सोही घरमा बस्छिन् ।